Apple inoda yayo yekutsvaga injini uye icha bheja pairi | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura Apple yakaburitsa nhau kuti iri kutogadzira yayo wega yekutsvaga tekinoroji kugadzirisa hutongi hweGoogle munzvimbo yekutsvaga injini.
Kuedza uku kuri kuramba kuchizivikanwa sezvo zviremera zvekuAmerica zvekutyisidzira zvichityisidzira mamirioni emadhora ekubhadharisa ayo Google ari kuita kuchengetedza nzvimbo yeinjini yayo pa iPhone. Izvi zvinotyisidzira kumanikidza kupera kwekudyidzana kwavo kwekutsvaga uye nekudzora kubata kwemaindasitiri ekutungamira.
Mune shanduko isingazivikanwe kubva kuazvino vhezheni yeiyo iPhone inoshanda sisitimu, iOS 14, Apple yakatanga kuratidza zvayakatsvaga uye kubatanidza zvakananga kune mawebhusaiti kana vashandisi vanyora mibvunzo kubva kumba kwavo skrini. Iyi yekutsvaga kwewebhu kugona kunoratidza kufambira mberi kukuru mukuvandudza kwemukati kweApple uye kunogona kuita hwaro hwekurwisa kuzere paGoogle.
Iyo kambani inozivikanwa zvakavanzika pamusoro pezvirongwa zvayo zvemukati, Asi danho iri rinowedzera kuumbowo hunowedzera hwekuti riri kushanda kuvaka mukwikwidzi weinjini yekutsvaga yeGoogle.
Zvisinei, ikozvino, iyo yekutsvaga injini yekutsvaga pane zvishandiso zveApple ichiri google, chimwe chinhu icho hofori yekutsvaga inobhadhara Apple pakati pe $ 8 bhiriyoni uye $ 12 bhiriyoni pagore.
Tsvaga vatengesi vanonongedzera kune zvakawedzera zviitiko zveApplebot, iyo iPhone inogadzira webhu inokambaira, iyo inoshandiswa kuvaka dhatabhesi hombe yezvinhu zvepamhepo zvinoumba hwaro hweyese injini yekutsvaga.
Zvimwe zviratidzo zvekuti Apple iri kuwedzera basa rayo kugadzira yako yekutsvaga tekinoroji ndeyekuti kambani yakapa mukuru weGoogle kutsvaga, John Giannnandrea, anopfuura makore maviri apfuura.
Kubatira kwacho kwaive kwakanangana nekuwedzera hunyanzvi hwekuziva pamwe nemubatsiri wake Siri, asi akauyawo nemakore masere echiitiko achimhanyisa injini yekutsvaga yepasirese.
Iyo kambani iri kukura yemukati yekutsvaga kugona inoipa imwe sarudzo kana ma regulator akavharira kubatana kwayo kunobatsira neGoogle. Dhipatimendi rezvemitemo reUS parakatangisa nyaya svondo rapfuura nezve Google kubhadhara kuApple kuti ive yekutsvaga yekushandisa ye iPhone, yakawedzera kukurumidza kuchirongwa.
Chimwe chinonyanya kukosha chirevo ndechekuti iOS 14 yakapfuura neGoogle zvimwe zvekutsvaga. Mibvunzo inogadzirwa muhwindo rekutsvagisa rinotsvedza kubva kuImba yepamba skrini, iyo Apple inodaidza kuti "Nhasi Kutarisa," ratidza runyorwa rweApple-inogadzirwa ekutsvaga mazano pane Google zvabuda.
Mhedzisiro iyi inosanganisira "Autocomplete" mazano inogadzirwa neApple, ichiratidza kuti iri kudzidza kubva kune zvakanyanya kukumbirwa nevashandisi vayo bhiriyoni.
Apple yakatarisana nesarudzo yekuchengetedza chibvumirano chayo chekutsvaga neGoogle kana kupandukira shamwari yayo yenguva refu.
Vaka mukwikwidzi wechokwadi yeGoogle injini yekutsvaga zvinogona kutora makore. Asi Apple ndeimwe yemakambani mashoma ane zviwanikwa zvekutora paGoogle.
Iine musika capitalization inodarika $ 2 tiririyoni uye inosvika madhora mazana maviri emadhora, kambani ine mukana kwete wekuramba chete mari inogamuchirwa kubva kuGoogle, asi zvakare yekudyara muiseva zvivakwa zvakakosha pakugadzira yemakwikwi yekutsvaga injini .
Izvo zvakakoshawo kuziva izvo Apple yagara ichiedza kuve neyayo uye kutonga iyo yakakosha zvikamu zvezvigadzirwa zvayo, kubva kune echinyakare machipisi ayo anopa simba zvese kubva ku iPhone kuenda kune yako AirPods uye tarisa zvishongedzo, kubatanidza kwakasimba pakati pe software yako neyakaomarara.
Asi kweanopfuura makore gumi, Apple yakachengeta Google senge yekutsvaga injini yeiyo iPhone.
Zvakatora vatongi kumumanikidza kuti asarudze pakati pekudzivirira hukama hwake neGoogle kana kupandukira waaitsvaga naye wekutsvagisa, kusundira tech hofori kutsvaga shanduko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Apple inoda yayo yekutsvaga injini uye icha bheja pairi
Wikimedia inosarudza kuendesa zvinyorwa zvayo kuGitLab